Khangela ukuba zeziphi iinwele ezimfutshane ezikufanela kakhulu | Amadoda aQinisekileyo
Ukucheba iinwele okufutshane ehlotyeni kuthintela ukuba sibile ngaphezulu kokufuneka xa iithemometha zihamba, kodwa ngaphambi kokuwela kwisilingo sokudlula isikliphu seenwele, jonga imilo yobuso bakho.
Ngaba uye wamdibanisa njengoRyan Gosling, uBen Affleck noJoseph Gordon-Levitt okanye okweqanda njengoCristiano Ronaldo, uZayn Malik noBrad Pitt?
Amadoda anobuso obude kufuneka alumke angayinqumli kakhulu, kuba ngale ndlela ubuso bunciphile. Ukubheja kunqunyulwe ngesikere endaweni yeziqhiki kwaye uya kufezekisa imvisiswano enkulu.
Ukufumana ezinye ii-bangs kubalulekile. Ugqiba ekubeni uyenze njani isitayile: ezantsi kwaye ezimdaka kwisitayile esenziwe ngombala, ngokucocekileyo, ukwahlula icala kwicala lobuchwephesha, okanye ukudityaniswa kwazo zombini, njengoko uBen Affleck enxibe emfanekisweni.
Ukuba unobuso obu-oval, ukomelela komhlathi wakho kukuvumela ukuba uwunxibe ube mfutshane njengoko ufuna ngaphandle kokulahlekelwa yimvisiswano. Cheba intloko yakho kwinani eliphantsi njengoTravis Fimmel, ophambili 'kwiiVikings', ukuba ufuna into entle kwaye awukhathali kujongeka kakhulu okanye yinto ehamba nesitayile sakho.
Isityalo esifutshane saseFrance, esifana neso sasinxitywe nguZayn Malik eMet Gala, sikwayinto entle kwaye iya kukufanela xa ufuna into entsha kodwa ngaphandle kokuyeka imilo ethile. Inokuba kunjalo ukuba uziva ukuba ubuso bakho budinga ukuphakama. Ukuba kunjalo, gcina amacala amafutshane kakhulu kwaye ungeze ivolumu phezulu nge-toupee, njengemvumi ye-DNCE uJoe Jonas.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Ungayifumana njani inwele emfutshane ethambileyo ehlotyeni
Iphalethi yeMeditera kunye nokuprintwa kwemizobo kwindawo entsha evela kwi-Island Island
Iindawo zokuhlala ezintle kakhulu eMallorca naseIbiza